ကဲလွန်းပြီး အဂါင်္အတွင်းမှာ sex toy ထုတ်မရတော့လို့ ဆေးရုံပြေးခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေး | Buzzy
ကဲလွန်းပြီး အဂါင်္အတွင်းမှာ sex toy ထုတ်မရတော့လို့ ဆေးရုံပြေးခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေး
အရှက်တွေကို ကွဲရော :O
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် Emma Phillips အမည်ရှိတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အမေ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ဆရာဖြစ်သင်တန်း တက်ရောက်နေသူ ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ပိတ်ရက်တုန်းက သူမရဲ. ချစ်သူ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် Lee Miller နဲ့ ချစ်တင်းနှောနေရင်း အခုဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။
အသကျ ၂၄ နှဈအရှယျ Emma Phillips အမညျရှိတဲ့ ကလေးတဈယောကျအမေ အမြိုးသမီးတဈဦးဟာ ဆရာဖွဈသငျတနျး တကျရောကျနသေူ ဖွဈပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ပိတျရကျတုနျးက သူမရဲ. ခဈြသူ အသကျ ၂၉ နှဈအရှယျ Lee Miller နဲ့ ခဈြတငျးနှောနရေငျး အခုဖွဈရပျ ဖွဈပှားခဲ့တာပါ။
တကယ်တော့ သူမရဲ. ချစ်သူက ဒီကိရိယာကို နောက်ပြောင်ပြီး သူမရဲ. ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နေရာကို ထည့်သွင်းလိုက်တာ နောက်တော့ ဘယ်လိုမှ ပြန်နှုတ်လို့ မရတာနဲ့ ဆေးရုံကို ပြေးခဲကြရတာပါ။
တကယျတော့ သူမရဲ. ခဈြသူက ဒီကိရိယာကို နောကျပွောငျပွီး သူမရဲ. ပုံမှနျမဟုတျတဲ့နရောကို ထညျ့သှငျးလိုကျတာ နောကျတော့ ဘယျလိုမှ ပွနျနှုတျလို့ မရတာနဲ့ ဆေးရုံကို ပွေးခဲကွရတာပါ။
သူမဟာ သူမတို့အနေနဲ့ နည်းမျိုးစုံစမ်းပြီး ပြန်နှုတ်ခဲ့ပေမယ့် အဆင်မပြေကြောင်း ၊ ဒါပေမယ့် ဆေးရုံမှာတော့ ခွဲစိတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ သူတို့အနေနဲ့ နောက်ဆိုရင်တော့ ဒီလို ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်တော့မှ သုံးတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
သူမဟာ သူမတို့အနနေဲ့ နညျးမြိုးစုံစမျးပွီး ပွနျနှုတျခဲ့ပမေယျ့ အဆငျမပွကွေောငျး ၊ ဒါပမေယျ့ ဆေးရုံမှာတော့ ခှဲစိတျထုတျနိုငျခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ ။ သူတို့အနနေဲ့ နောကျဆိုရငျတော့ ဒီလို ပစ်စညျးတှကေို ဘယျတော့မှ သုံးတော့မှာ မဟုတျဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။